Herimpanahy vaovao | Hevitra MPANOHARIANA
Ho an'ny mavitrika manoratra herisetra ao amin'ny forum tim
Tsy resy lahatra amin'ny fanindrahindrana herisetra ataonareo aho satria ny olo-tsotra foana no lasibatra avy eo. Efa voamariko fa isaky ny ao sy mavitrika manoratra ao ireo mpanindrahindra herisetra ireo dia misy sampona mivoaka foana eny amin'ny kianjan'ny ara-dalàna ka ny olndehibe efa retirety sy ny vehivavy hatrany no misanehaka noho ny ataon'ireo jiolahimboto mpanimba tolona eo ivelan'ny kianja ireo. HIta fa tsy mpitolona ianareo fa mpanimba tolona, raha misy ny zavatra tianareo atao tsy mila tenenina ao izany fa matoa minia manely ireny hafatrareo ireny ianareo dia ny hanasoketa ny mpanohana an-dRavalomanana no tanjonareo! Izay no anisan'ny mahatonga ahy hirona kokoa amin'ny hetsiky ny mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao. Hery ve no tianareo hatao nefa hery tsy mitovy mivandravandra be izao tsy famonoan-tena. Teny tsy misorona izay ary matoa aho eto amiko no manoratra dia mba ho fanajako ny hevitro sy anehoako ny tsy fitovian-kevitra aminareo.
Nampidirin'i jentilisa @ 08:43, 2010-01-09 [Valio]
Mbola manohy mamoaka ny hevitro hatrany aho : Mba hevitra taingina entina manasatra amin'ny tsy antony ihany koa ny mbola hametrahana fivoriana eny amin'ny Magro androany Sabotsy. Toa karazana misy resaka fialonana ny mpitondra ny fivavahana ihany raha ny fijeriko azy, hitandry zareo fa hirona any amin'ny mpitondra fivavahana indray ny ankamaroan'ireo nitolona teny hatrany nandritra ny volana vitsivitsy satria ry zareo mpitarika ao sasatra ny milaza hanao hetsika lehibe nefa tsy mankaiza afa-tsy manafay ny mpitolona ao aminy hatrany, sahala amin'ny hoe fahavalony ihany ireto mpitaky ny hiverenan-dRavalomanana ireto.
Efa miharihary izao fa tsy ankasitrahan'ny mpampiasa hery ny hilahadaharanao manerana ny tanàna dia mbola entina toratorahana baomba ihany ny mpitolona ao aminao. Efa lasa lavitra ny fiheverako hoe entinareo amin'ny lalana tsy izy ny tolona amin'izao fotoana izao, na ezahinareo izay handravana ilay tolona tsy mampiasa herisetra. Kendrenareo ny tsy hahatongavan'ny mpitolona ao aminareo eny Antsahamanitra ka lasa mampiahiahy tanteraka ny fihetsika ataonareo.
Nampidirin'i jentilisa @ 09:45, 2010-01-09 [Valio]
Tsy ampy ny Vaovao aty ivelany
ATY IVELANY DIA TSY MAHENO MIKASIKA NY MOUVANCES 3 FA DIA NY AN'I TGV HATRANY NO LAZAIN'NY FRANTSAY
Nampidirin'i Rama @ 10:42, 2010-01-09 [Valio]
Izaho Katolika ary tsy tia ny mampifangaro politika sy Fivavahanan mihitsy.
Izao kosa anefa tsapako fa raha ny mpitondra fivavahana no mitarika ary tsy mivoaka amin'ny maha olom-panahy azy araky ny nolazainao fa ny hery tsy mahaleo fanahy dia hajaiko izay.
Ho hitako tsara eo ny "position" katolika amin'io Antsahamanitra io fa mety tena vao miha ho diso fanantenana be aho.
Raha tsy izany vaky hehy aho tamin'ilay resaka Asaramaimbo iny na dia nantao aza ny tsy hiomehy ary nisy namako niantso ahy hoe vakio fa nitovy tamin'izay ihany ny eritreriny.Efa voavakiko moa ilay izy tamin'izay.
Ilay fintina farany hoe tsy izay mihitsy no saika ho resaka androany vao miha_nanapatsinay.
Nampidirin'i Mmm @ 11:48, 2010-01-09 [Valio]
Nalaza tokoa ny tsahon'ny fanakanan'ny miaramila tsy hiditra an'Antsahamanitra na ny handarohana baomba izay mankao, noho izany dia be no tsy sahy niditra tao anatin'ny kianja fa nionona tany ivelany fotsiny. Tsy nisy nanampo akory fa mbola nalalaka ny teny aloha indrindra. Tsy misy afa-tsy vavahady roa miakatra any ambony manko io toerana io ka izay no tena nampatahotra ny sasany. Izay mahalala fa toerana an'olona tsy miankina amin'ny fanjakana io ka tsy azon'ny mpitondra isalovanina no tsy nisalasala niditra tao... Indrisy moa fa tsy manana fakantsary intsony ny tena sady tsy afaka nandeha tany fa ny tatitr'izay tany sisa niononana... raha tany manko aho tsy maintsy naka sary ny tany ivelan'ny kianja sy ireo miaramila maro niatrana tao. Na betsaka aza ny olona nikasa ho any dia maro no tsy afaka na nisalasala fandrao manko voatoraka baomba tokoa...sady nijanona an-trano ihany vantany vao henony tamin'ny radio fahazavana fa nandeha mivantana tao ny fotoana dia nionona nijanona tao an-trano ihany. Noho izany, tolona ilaina hamafisina ny serasera...
isaorana kosa ireo izay tonga hatrany na dia irotsaka aza ny orana
Nampidirin'i jentilisa @ 21:46, 2010-01-09 [Valio]
Izaho saika hangataka taminao ny famintinana ny zava-nitranga h@ izay kinanjo moa ny anareo no tonga aloha koa dia isaorana betsaka eram-po sy eran-tsaina. Anontaniako fotsiny hoe azo ampiasaina hadika sy haparitaka malalaka ve izy ireo sa mila fahazoan-dalana isan-karazany?
Miara-kory @ rehetra kosa @ny nahalasanana tampoka an'i Kardinaly RAZAFINDRATANDRA... very namana teto an-tany ny Filoha, enga anie hitsinjo avy any an-danitra izy!
Farany, raha vao hanomboka hampiseho fa "mialona" ary tsy faly @ fironan'ny olona hanaraka ny mpitondra fivavahana ny mpitarika ny mpanara-dalàna dia na izay no vita ny aminy (haloan'ny vahoaka eo izy!) na izay vao hisy hifandritaka @ izay fa tsy roa mifanandrina intsony fotsiny ary handihy ambony fasana ny "Fat(y)!"
Mirary soa mandrakariva! Am-pitiava-namana.
Nampidirin'i gasi @ 03:20, 2010-01-10 [Valio]
mijery tranokala etsy sy eroa aho manara-baovao na tara ihany aza ka nahatsikaritra an'ito resaka ity koa entiko eto fa ao @ mydago nahitako azy mahakivy ny mamaky sy milaza hevitra... "«Malagasy ny kapitenin-tsambo hatramin’izay 50 taona izay, mihitsoka matetika anefa ny sambo ben’ny Madagasikara» hoy (ilay jiolahin-tsambo...) raha nanakiana ny Filoha telo lahy teo aloha izy"
Tsy mazava be toy ny masoandrobe lohataona ve io hilazana hoe haveriny @ vahiny ny fitondrana??? Tsy vaovao @ fiampangan-tena sy @ "filazàna ny marina tsy manantsiny" mantsy ilaikely! Sa ahoana?
Nampidirin'i gasi @ 03:46, 2010-01-10 [Valio]